कान किन पाक्छ ? यसरी बच्न सकिन्छ
Thu, Apr 19, 2018 | 23:25:48 NST
17:27 PM ( 10 months ago )
डा. अजित नेपाल -
कहिले काँहि कान चिलायो भने सिन्काले कोट्याउने गर्छौं, यसले कानमा चोट लागेर कान पाक्न सक्छ । कान कोट्याउनाले कानमा चोट लाग्नु, कान दुख्नु, नाक बन्द हुनु, रुघा लाग्नु, कान पाक्नको लक्षण हो ।
नाकबाट सिँगान, आखाँबाट आँसु बगेजस्तै कान पाकेपछि कानबाट पानी जस्तै बाग्लो तरल वस्तु निस्कन्छ, जुन तरल पदार्थ बगेर घाँटीमा पुग्यो भने इन्फेक्सन हुन्छ । यस्तै कान पाकेपछि कान डम्म हुने, जाली पछाडि पानी जम्ने हुन्छ ।
यस्तै कानमा ढुसी आउने, हेर्दा रथको पाङग्रा जस्तो रगतका जाली देखिने, बिहानपख बढी दुख्ने, खानेकुरा खाँदा थुक निल्दा गा¥हो हुने, नाकमाथि कानको बाटो खुल्ला रहनाले केही चपाउँदा साह्रै दुख्ने हुन्छ । कान पाक्ने कुनै उमेर समूह हुँदैन । बालबालिकादेखि बुढाबुढीसम्म सबै उमेरका मानिसको कान पाक्न सक्छ । कान पाक्ने समस्यालाई वेवास्ता गर्नु हुँदैन । कान पाकेको लामो समयसम्म पनि उपचार गरिएन भने श्रवण शक्ति कम हुँदै जाने, बारम्बार सङ्क्रमण हुने गर्दछ ।
कसरी पाक्छ कान ?
कानेगुजी बन्ने क्रममा अनावश्यक कानेगुजी लेदो हुँदै निस्किने गर्दछ । कसैकसैको कानेगुजी सुख्खा पनि हुने गर्दछ । सामान्य तेलजस्तो पदार्थ कानले नै फाल्ने गर्दछ । पहिले कानमा तेल हाल्ने चलन थियो । तर कानमा तेल हाल्नाले कानेगुजी ननिस्केर झन् जम्मा भएर बस्ने हुन्छ । सानो बालबालिकालाई सुताएर दुध खुवाउने बानिले दुध सर्केर नाकबाट कानमा पुग्ने कानबाट भित्र छिर्ने भएकोले बच्चाको कान पाक्ने गर्र्दछ । कानको प्वालमा सिन्का, चाबी बाहिरी सामानहरुले कोट्याउँदा त्यसमा किरा टाँसिएको हुन सक्छ, त्यसैले किराहरुको सङक्रमणबाट कान पाक्ने सम्भावना हुन्छ । यो संक्रमण विस्तारै फैलिँदै शरीरको अन्य भागमा पनि पुग्ने हुनाले छिटै उपचार गरेर अपरेशनबाट पनि जोगिन सकिन्छ ।
कान पाक्ने समस्या नआओस् भन्नको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले कान कोट्याउने बानी हटाउनुपर्छ, यी सँगै स्वस्थ खानेकुरा खाने, धुलो धुवा चिसोबाट टाढा रहनुपर्छ । समयसमयमा कानको परिक्षण गराउने, बच्चाहरुलाई दुध ख्वाउँदा टाउको माथि गरेर कोल्टे पारेर खुवाउने गर्नुपर्छ ।
नदी, पोखरी, कुवा, आदिमा मानिसहरुले फोहोर गर्ने भएकोले जहाँ पायो त्यही पोखरी, कुवा, नदीमा नुहाउनु हुँदैन । कानमा तेल, दुध, पानी सकेसम्म पार्नुहुँदैन र रुघालाई हेलचेक्र्याई गर्नुहुँदैन । तर कान धेरै चिलाएमा स्वास्थ केन्द्रमा गई जाँच गरी स्वास्थयकर्मीको परामर्शअनुसार औषधीको प्रयोग गर्नुपर्छ ।